Michael Sorich – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Kung Fu Panda2(2011) Unicode Kung Fu Panda2မှာတော့ 'ပို' ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ကြည့်ရှုရမှာပါ.... 'ပို' ရဲ့အဖေဖြစ်သူဟာ မွေးစားအဖေဖြစ်နေပါတယ်... ' ပို' လသားအရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့ရွာလေးကို တပ်ဖွဲ့တစ်ခုက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးတာကို ခံလိုက်ရပါတယ်... ပို ရဲ့မိဘတွေဟာ ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ ပို့ ကို စွန့်ပစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်...ဒါက ပို ရဲ့ ဘသ ဇာတ်ကြောင်းပါ... အခုချိန်မှာတော့ ဒေါင်းမင်းသားတစ်ယောက်ဟာ လက်နက်ဆန်းတစ်ခုကို တီထွင်ပြီးတော့ တရုတ်ပြည်ကြီးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်နေပါပြီ... ဒါကို ပို နဲ့ သူ့အဖွဲ့က တားဆီးဖို့အတွက် တာဝန်ကျလာပါပြီ...ဒီတော့ ပို တို့တွေ ဒေါင်းမင်းသားကို ဘယ်လိုတားဆီးကြမှာလဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦး grin emoticon ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း ပထမကားလိုပဲ rating ကောင်းကောင်းရထားတဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် (IMDb rating 7.3/10 ) အားပေးကြပါ Zawgyi Kung Fu Panda2မွာေတာ့ 'ပို' ရဲ႕ ...
Resident Evil: Degeneration (2008) Unicode တိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဟာ Harvardville မြို့တော်မှာ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပျံနှံ့စေကာ လက်စားချေခဲ့ပါတယ်. အစိုးရက ထိုဗိုင်းရပ်စ် ပျံနှံ့မှု ဘေးအန္တရာယ်ကို တုံ့ပြန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ယခင်က အထူးနှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့က နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Leon S Kennedy နှင့် Claire Redfield တို့ကို သမိုင်းကြောင်းတွေနောက်ထပ်မပြောင်းလဲခင်မှာ သန္ဓေပြောင်းမကောင်းဆိုးဝါး တစ်ကောင်အား နှိမ်နင်းရန် ထိုမြို့သို့လွှတ်လိုက်လေသည်။ထိုနောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့စောင့်မျော်ကြည်ရှုခံစားပေးကြပါလိုပြောရင်း သာယာချမ်းမြေသောနေ့လးဖြစ်ပါစေ။ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Pyae Sone Ynwa ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi တိုက္ခိုက္ေရးကြၽမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ဟာ Harvardville ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေသေစႏိုင္ေလာက္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ပ်ံႏွံ႔ေစကာ လက္စားေခ်ခဲ့ပါတယ္. အစိုးရက ထိုဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံႏွံ႔မႈ ေဘးအႏၲရာယ္ကို တုံ႔ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ ယခင္က အထူးႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႕က ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Leon S Kennedy ႏွင့္ Claire Redfield တို႔ကို သမိုင္းေၾကာင္းေတြေနာက္ထပ္မေျပာင္းလဲခင္မွာ သေႏၶေျပာင္းမေကာင္းဆိုးဝါး တစ္ေကာင္အား ႏွိမ္နင္းရန္ ထိုၿမိဳ႕သို႔လႊတ္လိုက္ေလသည္။ထိုေနာက္ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာေတာ့ေစာင့္ေမ်ာ္ၾကည္ရႈခံစားေပးၾကပါလိုေျပာရင္း သာယာခ်မ္းေျမေသာေန႔လးျဖစ္ပါေစ။ Credit Review ဒီဇာတ္ကားကို ...
IMDB: 6.5/10 28296 votes